Usb-C hub vagadziri uye vanotengesa - China usb-c hub factory
Yakareba Range 2624ft. Wireless ...
Mini Chitarisiko And Long Di ...
Ultra Yakareba-Range Wireless 4 ...
Zero Latency Uye Mutengo-effec ...
▪ Brocade AI 6 mu1 USB Type C Hub iri multifunctional hub inowedzera yakaganhurirwa laptop yekubatanidza.
▪ Iyo inouya neyakanyanya kusanganisa Type-C multifunctional adapter inowanikwa.
▪ 4K HDMI Vhidhiyo Kuburitsa: Tsigira 4K @ 30Hz kana 1080P @ 60Hz vhidhiyo kuburitsa. Mirror kana kuwedzera notibhuku rekunyorera kuHDTV, kuongorora kana purojekita. Nakidzwa nemafirimu kana vhidhiyo mutambo pane yako yekutarisa. Ratidza yako PPT kuburikidza nemaprojekita emusangano webhu.
▪ Ultra-Yakakwira-Yekumhanyisa Dhata Yekufambisa: 3 USB3.0 chiteshi chinotamisa vhidhiyo, mimhanzi uye mafaera anosvika ku5Gbps, inova ka10 nekukurumidza kupfuura USB 2.0. Saka iwe unogona kuzadza mafaira ekuchinjisa munguva pfupi kwazvo.
▪ 100W PD Yekukurumidza Kubhadharisa: 100W simba rekuendesa rekuchaja chiteshi rinotendera iwe kubhadharisa komputa yako nekumhanya kwazvo Unogona kushandisa Hub uchiraja.
▪ 4K HDMI Vhidhiyo Adapter: Inokutendera iwe girazi kana kuwedzera yako laptop laptop muna Max 4K UHD 3840 × 2160 @ 30Hz. Ongorora: USB C chiteshi pakombuta yako inoda kugona kwevhidhiyo kuburitsa.
▪ SD / TF Kadhi Muverengi: Iyo yekumhanyisa kumhanya kweiye kadhi muverengi ndeye 480Mbps. SD & TF makadhi anogona kuverenga panguva imwe chete. Kunonyanyisa kugona kusvika kumakadhi e2TB. Inoenderana ne6 dzakasiyana Memory Kadhi: SD Kadhi / SDHC / SDXC / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC.
▪ 5Gbps Dhata Yekutapurirana: 3 yakakwira-mhanyisa USB-A 3.0 madoko anokwanisa 5Gb / s yekumhanyisa kumhanyisa yekukurumidza kudhinda dhata, ichibvumira kubatanidza akawanda eUS peripherals senge U disk, Inotakurika SSD, keyboard, mbeva, nezvimwe.
▪ Brocade AI 7 mu1 USB Type C Hub iri multifunctional hub inowedzera yakaganhurirwa laptop yekubatanidza.
▪ Kusanganisira 2 * USB 3.0, 1 * HDMI, 1 * Ethernet (RJ45), 1 * TF kadhi slot uye 1 * SD kadhi slot uye kutsigira PD kuchaja.
▪ SuperSpeed ​​Dhata Yekutamisa: Matatu USB 3.0 madoko anotsigira dhata yekuchinjisa mareti anosvika ku55bps. SD & Micro SD kadhi slots (ayo asingakwanise kushandiswa panguva imwe chete) tsigira dhata rekuchinjisa mareti anosvika ku480Mbps. Gigabit Ethernet chiteshi inotsigira 10/100 / 1000Mbps network kumhanya
▪ Kurumidza PD Kubhadharisa: Iyo USB-C yekuchaja chiteshi inotsigira inosvika ku100W Simba Dhirivhari kuti uchengete yako MacBook Pro kana imwe inowirirana laptop yakazara zvakazara mumaawa maviri (uchishandisa mudziyo wako wepakutanga gadziriso yemagetsi) paunenge uchishandisa mamwe ese mabasa ehubhu
▪ Kugarisana kweMidziyo: Inoenderana neMacBook Air / Pro 13 inch, Dell XPS 15, HP Specter x360, HP Elite x2 1012, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga, Razer Blade Stealth, Huawei MateBook, nemamwe malaptop erudzi C
▪ Ultra HD Vhidhiyo: HDMI chiteshi chinoburitsa zvisarudzo kusvika ku4K @ 30Hz kuchiratidziro chakabatana
▪ Brocade AI 8 mu1 USB Type C Hub iri multifunctional hub inowedzera yakaganhurirwa laptop yekubatanidza.
▪ Kusanganisira 3 * USB 3.0, 1 * HDMI, 1 * 3.5mm odhiyo, 1 * TF kadhi slot uye 1 * SD kadhi slot uye kutsigira PD kuchaja.
▪ [Ita Kuti Basa Rako Risashande]: Type C Hub inosanganisirwa nechaja isina waya inogona kugutsa zvese zvinodikanwa mukutamisa data, kuongorora kuwedzera uye kuchaja zvisina waya. Maviri 3.0 USB madoko uye SD / TF makadhi Reader inotsigira yekumhanyisa kumhanyisa mareti anosvika kusvika mashanu Mipata.
▪ . Gadzirira kugadzirira firimu rako-rakafanana nemabiko ekuona iyo mhando c hub inounza kwauri.
▪ [Yakagadzikana & Yakavimbika Kubatana]: Kutenda PD3.0, kubatana pakati pemalaptop ne USB C Adapter kunova kwakagadzikana. Hapanazve kunetseka nezve kurasikirwa kwedata kana uchiburitsa tambo yekuchaja. Tsigira PD kuchaja pane max 60W.